Manila na-egbochi ndị njem ụgbọ elu mba ofesi na 1,500 mgbe ha debanyere nọmba COVID
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Airlines » Manila na-egbochi ndị njem ụgbọ elu mba ofesi na 1,500 mgbe ha debanyere nọmba COVID
Airlines • Airport • Akụkọ Ọchịchị • Akụkọ Ahụike • News • Ozi Na -agbasa Ozi Philippines • Tourism • Transportation • Mmelite nke Njem njem • Ihe nzuzo Njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Akụkọ dị iche iche
Philippines dị na njikere mgbe nnukwu nsogbu dị na ikpe ọhụrụ COVID-19. Emechiri ọnụ ọgụgụ na ọdụ ụgbọ elu amachibidoro, obodo ahụ na-adọta breeki mberede.
Febụwarị 17 Manila debara nnukwu ọrịa 1,718 ọhụrụ COVID, na Machị 28 otu obodo ahụ debanyere ọrịa 10,000 ọhụrụ
Ndị ọchịchị na Manila kpọchiri isi obodo Philippines
Amachibidoro ndị njem mba ofesi ugbu a na ndị mbata mba 1,500 na ọdụ ụgbọ elu mba Manila.
Manila na mpaghara ndị gbara ya gburugburu kọọrọ 10,000 okwu ọhụrụ COVID-19 ma na-etinye obodo ahụ na mkpọchi ruo ụbọchị ụka Ista.
Na mgbakwunye, Ndị Ọrụ Ọdụ ụgbọelu enyela ụkpụrụ nduzi banyere njem ụgbọ elu na-egbochi mbata nke ndị njem mba ụwa na Manila's Ninoy Aquino International Airport (NAIA) ruo ihe karịrị ndị njem 1,500 kwa ụbọchị.
Otú ọ dị, nke a, ga-edozigharị mmegharị dịka Ngalaba ationgbọ njem kpebiri.
Boardlọ ọrụ ahụ adọwo ụlọ ọrụ ụgbọelu niile aka na ntị na NAIA ka ha ghara ịgafe ikike enyere ikike, ma ọ bụghị ya, hey ga-ata ahụhụ dabere na Joint Memorandum Circular No. 2021-01 nke dị na 08 Jenụwarị 2021, nke Manila International Airport Authority (MIAA) nyere, Clark International Airport Corporation (CIAC), Civil Aviation Authority nke Philippines (CAAP), na Civil Aeronautics Board (CAB);
A ga-ahapụ ọrụ azụmahịa nke ụlọ na-agbaso ihe achọrọ ma ọ bụ ihe mgbochi na ikike na ugboro ole ụgbọ elu nke ndị LGU niile dị na mpụga nke NCR + nwere ike itinye, bọọdụ ahụ kwukwara.
"Aka adaha" maka imeghe njem nlegharị anya na Bali site na ịmechibido onye ọ bụla
Aja China gbanye South Korea n’ime ala Gobi